Ababoneleli bemaski wamehlo kunye neFektri - China Abavelisi bemaski yeliso
Printa uyilo lwesilikhi yamehlo
Iimpawu zeMveliso Ukunxiba imaski yamehlo yesilika kuya kukwenza uzive ukhululeke ngakumbi kwaye ungathatha ubuthongo ngokukhawuleza okanye ubuthongo obunzulu naphina nanini na kwaye uvuke uziva uphumle kwaye uhlaziyekile. I-100% yesilika yesilk, iliso lethu leemaskhi livakalelwa lithambile kwaye ligudile ngokuchasene nolusu lwakho ngapha kwamehlo akho kwaye lunefuthe elihle ekuthinteleni ukukhanya. Ziyaphatheka kwaye zincinci ngokwaneleyo ukuba zingatyibilika kwingxowa yakho yokuhamba ngokulula. Uhlobo lwe-Embroidery Logo: isilika esongelwe nge-elastic band; Iprinta yoLuhlu lwePrinta: ibhendi yesilika esongelweyo. Iqinile ...
I-mulberry isilikhi yamehlo
Iimpawu zeMveliso Ukunxiba imaski yamehlo yesilika kuya kukwenza uzive ukhululeke ngakumbi kwaye ungathatha ubuthongo ngokukhawuleza okanye ubuthongo obunzulu naphina nanini na kwaye uvuke uziva uphumle kwaye uhlaziyekile. I-100% yesilika yesilk, iliso lethu leemaskhi livakalelwa lithambile kwaye ligudile ngokuchasene nolusu lwakho ngapha kwamehlo akho kwaye lunefuthe elihle ekuthinteleni ukukhanya. Ziyaphatheka kwaye zincinci ngokwaneleyo ukuba zingatyibilika kwingxowa yakho yokuhamba ngokulula. Uhlobo lwe-Embroidery Logo: isilika esongelwe nge-band elastic; Iprinta yoLuhlu lwePrinta: ibhendi yesilika esongelwe nge-elastic. Qina ...
Uyilo lwefashoni imask yokulala
Iimpawu zeMveliso Ukunxiba imaski yamehlo yesilika kuya kukwenza uzive ukhululeke ngakumbi kwaye ungathatha ubuthongo ngokukhawuleza okanye ubuthongo obunzulu naphina nanini na kwaye uvuke uziva uphumle kwaye uhlaziyekile. I-100% yesilika yesilk, iliso lethu leemaskhi livakalelwa lithambile kwaye ligudile ngokuchasene nolusu lwakho ngapha kwamehlo akho kwaye lunefuthe elihle ekuthinteleni ukukhanya. Ziyaphatheka kwaye zincinci ngokwaneleyo ukuba zingatyibilika kwingxowa yakho yokuhamba ngokulula. Uhlobo lwe-Embroidery Logo: isilika esongelwe nge-band elastic; Iprinta yoLuhlu lwePrinta: ibhendi yesilika esongelwe nge-elastic. Iqinile ...
Isilungelelanisi esenziwe ngamehlo sesilika
I-poly satin yokulala imaski
Ukukhanya lutshaba lokulala, ke lo mmangaliso unceda ufumane ubumnyama obupheleleyo naphi na apho u-zzzz. Imaski yethu yenziwe nge-satin ethambileyo .Kwaye iphindwe kabini njengebhanti yentloko yobuhle bakho bobusuku-ngokuqinisekileyo imalunga nokungabi nasiphako. Isigqumathelo se-satin esithambileyo esine-sms esenziwe ngumntu, siya kwenza isipho esikhethekileyo kuye! • Ubungakanani: Ubungakanani obunye buhambelana kakhulu (umtya onokuhlengahlengiswa). Imilinganiselo: Ubungakanani babantu abadala - 20cm x 10cm, Ubungakanani babantwana - 17cm x 8cm • Izinto: Satin • Mu ...
Imaski yokulala imaski
isilikhi yamehlo esilika enelogo yokuhombisa
Uyilo lwefashoni yoyilo lwesilika yokulala
Umbala opinki nge-Embridory logo yesilika
Imask yokulala isilika ethandekayo
Isilikhi sokulala somntu esenziwe ngumntu
Uyilo oluqhelekileyo lwesilika